के नेकपामा मन्त्री बन्न योग्य नेता नभएकै हुन् ? किन भेटेनन् ओलीले ? -योहोखबर
काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खाली मन्त्रालयमा सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नखोजेकै कारण ढिलाई भएको नेताहरुले बताएका छन् । नेकपाभित्र अयोग्य व्यक्तिहरु मात्रै देखिदाँ मन्त्री नियुक्तीमा ढिलाई भएको चर्चा चल्दा नेताहरुले भने पार्टीभित्र एकसय एक मध्येकै योग्य खोज्दा केही ढिला हुन गएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार तथा सञ्चार र अर्थ लगायत मन्त्रालयको नेतृत्व लामो समयदेखि आफैँ राखेका छन् । आफूले मात्र राखेर नपुगेर ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई दिएका छन् । योग्य व्यक्ति चयन गरेर सरकारको काम चुस्तदुरुस्त पार्नुको साटो आफ्नो वा अन्य मन्त्रीको मातहतमा मन्त्रालयको जिम्मा लगाएपछि भएका नेताहरुको योग्यतामा प्रश्न उठेको छ । तर, नेकपाका नेता भने यो कुरा अस्वीकार गर्छन्, पार्टीभित्र मन्त्री पदका लागि योग्य नेता धेरै हुँदा जिम्मेवारी चयनमा विलम्ब भएको उनीहरुको तर्क छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली भने विभिन्न मन्त्रालयमा कसरी आफ्नो पक्षका नेता नियुक्ति गर्ने भने दाउमा देखिन्छन् । राष्ट्रियसभाको पदावधि सकिएर मन्त्रीबाट हटेका युवराज खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेर यसको संकेत गरिसकेका छन् । योग्य र अयोग्य छुट्टयाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि पटक–पटक हेरफेर गर्दा अस्थिरता निम्तिने कतिपयको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली हेर्दा उनले खाली मन्त्रालय आफू मातहतमा राखेर शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्न खोजेको देखिएको छ । उनी आफ्नो पल्ला भारी नभएसम्म कुनै खालका नियुक्ति दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्, चाहे पार्टीबाट ठूलै विरोधको सामना गर्न किन नपरोस् ।
३४ दिन अघि २०७७ आश्विन ०२ २०:३३ मा प्रकाशित